စိတ်ကုန်သွားပြီဆို ဒီ အချက်လေးချက်ကို သတိရပါ - Hintharmedia
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသူတွေအဖို့ အလုပ်လုပ်နေရင်း စိတ်ပင်ပန်းတာ၊ အားအင်ကုန်ဆုံးတာတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို နွမ်းနယ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ အလုပ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်း အလုပ်တွင်တော့မှာ မဟုတ်ဘဲ အချိန်ကုန်ပြီး အကျိုးမရှိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းလျလာတဲ့ အခါမျိုးမှာ ပြန်လည်ပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွဖို့ အတွက် ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ ဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. Power-post နဲ့ မတ်တပ်ရပ်ပါ။
ပါဝါပိုစ့်ဆိုတာက ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ခြားထားပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ခါးမှာ ထောက်ရင်း ခပ်မော့မော့ ရပ်တဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ခနာကိုယ်အနေအထားဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွက်တော့ အထူးတလည် ပြောင်းလဲတာမျိုး မရှိပေမယ့် ခနာကိုယ်ကိုတော့ အားပြန်ပြည့်စေပြီး လန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖြစ်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်မောင်း၊ ရင်အုပ်နဲ့ ကျောရိုးတစ်လျှောက်ကို ဆွဲဆန့်ပေးသလို ဖြစ်စေတဲ့အတွက် အညောင်းအညာပြေစေမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂. (၃)မိနစ်လောက် ခဏနားပါ။
အလုပ်ချိန်ဆိုရင် အာရုံစူးစိုက်ရတာတွေလဲ များလွန်းတာမို့ မျက်လုံးနဲ့ အာရုံကြောတွေကို ခဏလေး အနားပေးဖု့ိ လိုအပ်ပါတယ်။ မျက်စိမှိတ်ပြီး ၃ မိနစ်လောက် အသက်ရှူသွင်း၊ ရှူထုတ် ပုံမှန်လုပ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာ အညောင်းအညာပြေလျော့လာတာကို ခံစားမိမှာပါ။
ချောကလက်စားခြင်းက စိတ်ကို ပြန်လည်လန်းဆန်းစေဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ချောကလက်ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေထဲမှာ စိတ်ကျရောဂါကို သက်သာစေပြီး စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရစေနိုင်တဲ့ ဓာတ်တွေပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် နွမ်းနယ်နေတဲ့ စိတ်ကို ပြန်ပြီး အားဖြည့်ပေးဖု့ိအတွက် ချောကလက်နည်းနည်းစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်တွေက စိတ်ကို လန်းဆန်းစေပြီး တည်ငြိမ်စေနိုင်တဲ့ အရောင်တစ်ခုပါ။ ဒါ့အပြင် အစိမ်းရောင်က ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို နှိုးဆော်ပေးပြီး ပျော်ရွှင်စေနိုင်တယ်လို့လည်း သိပ္ပံလေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေအရ တွေ့ရှိမှုတွေများစွာ ရှိထားပါတယ်။ သစ်ပင်စိမ်းစိမ်းစိုစိုတွေကို ကြည့်ပေးခြင်းအားဖြင့် စိတ်ဓာတ်ပြန်လည်တက်ကြွစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်မှာပါ။
ယခင်ဆောင်းပါးဆောင်းရာသီဟာ လက်ချည့်သက်သက် မလာဘဲ စတော်ဘယ်ရီကိုပါ ယူဆောင်လာတယ်
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးနီးလွန်းလို့ မမြင် သတိမထားမိတဲ့ အာလူးကြော်ရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေ . . .